Забур 129 CARS - Nnwom 129 AKCB
1“Wɔahyɛ me so pii afi me mmofraase,
ma Israel nka ɛ.
2“Wɔahyɛ me so pii afi me mmofraase,
nanso wontumi nnii me so nkonim ɛ.
3Fɛntɛmfo afɛntɛm mʼakyi
ayɛ wɔn nkɔmoa atenten.
4Nanso Awurade yɛ ɔtreneeni;
watwitwa amumɔyɛfo hama afi me ho ama made me ho.”
5Ma wɔn a wɔtan Sion nyinaa
mfa animguase nsan wɔn akyi.
6Ma wɔnnyɛ sɛ sare a ɛwɔ ɔdan atifi,
a ennyin na ɛhyew;
7na nnɔbaetwafo ntumi nnya biribi mfi mu nhyɛ ne nsa ma,
na nea ɔboaboa ano nso nnya hwee nhyɛ nʼabasa ma.
8Mma wɔn a wotwa mu wɔ hɔ no nka se,
“Awurade nhyira mmra mo so;
yehyira mo wɔ Awurade din mu.”
AKCB : Nnwom 129